Ra’iisul wasaaraha dalka oo kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaaraha dalka oo kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha.
Ra’iisul wasaaraha dalka oo kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha ee shalay uu u magacaabay isku dubba ridka dadaallada loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha ka dhashay roobaka.
Previous articleDowladda Finland oo qalab Studio oo casri ah ku wareejisay TV ga Qaranka Soomaaliyeed.
Next articleHay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka oo shir uga furmay dalka Turkiga